स्विमिङ पूलमा रमाएकी प्रियंकाको तस्वीरले आलोचना र प्रशंसा दुबै पाइरहेका छन् । हेर्नुहोस भिडियो सहित – Khabar28media
स्विमिङ पूलमा रमाएकी प्रियंकाको तस्वीरले आलोचना र प्रशंसा दुबै पाइरहेका छन् ।
प्रीयंकाको भब्य ‘बेबी सावर’ पार्टी, आयुष्मान र साथीहरुले दिए यस्तो सप्राईज, हेरौ २० तस्बिर …।
सधै चर्चा र बिबादमा आईरहने नायिका प्रियंका कार्की गर्भवती भएपछी झनै चर्चामा छिन् । गर्भवती भएपछी झनै चर्चामा रहेकी अभिनेत्री प्रियंकाले सामाजिक संजालमा तस्बिर सार्बजनिक गरेपछी राम्रा नराम्रा अनेकौ टिकाटिप्पणी आएतापनी उनी आफू गर्भवती भएकोमा निकै खुशी छिन् र निकै रमाईरहेकी छिन् ।
प्रियंकाले इन्स्टामा उत्कृष्ट ‘बेबी सावर’ को आयोजना गरेकोमा श्रीमान धन्यवाद दिँदै यो आफूहरुका लागि सर्वश्रेष्ठ वर्ष रहेको बताएकी छन् । उनले लेखेकी छन्, ‘हाम्रो चमत्कार र सानो राम्रो फूललाई स्वागत गर्न अब मबाट प्रतिक्षा हुन सक्दैन । तिम्रो (आयुष्मान) साथका कारण मेरो गर्भमा बढिरहेको जीवनलाई हामीले प्रेम, खुसी र नयाँ सुरुवातका लागि तयार गरेका छौं ।’
पहिलो पटक गर्भवती भएको सार्बजनिक गर्दै आफ्नो र श्रीमान आयुष्मान देशराज जोशीको फोटो सेयर गर्दै लेखेकी थिईन्, ‘अब तपाईंहरू मलाई सोध्न छाड्नु भए हुन्छ! हो, हामी गर्भवती छौं। केही समय अघिदेखि सामाजिक सञ्जालमा उनी गर्भवती छन् कि भन्ने विषयमा चर्चा चलेको थियो ।
उनका शुभचिन्तक तथा फ्यानहरूले उनी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नदेखिएको र पोस्ट गरिएका फोटोमा मोटाएको देखिएको जस्ता कुरालाई आधार बनाएर प्रियंका गर्भवती भएको हो कि भन्ने अड्कल काटेका थिए।
साउनमा किन लगाइन्छ हरियो पहिरन ? यस्तो कारण सबैले जानि राखौ
Previous Article साउनमा किन लगाइन्छ हरियो पहिरन ? यस्तो कारण सबैले जानि राखौ
Next Article पति राज पक्राउ परेसंगै शिल्पा शेट्टी पनि पक्राउ पर्दै, के लाग्यो उनलाई आरोप ?